Guddiga Doorashooyinka Somaliland oo bilaabay diiwaangelinta codbixiye-yaasha | KEYDMEDIA ENGLISH
Guddiga Doorashooyinka Somaliland ayaa shalay oo Axad aheyd gobolka Awdal iyo degmooyinka kale ka bilaabay Wajigii Koowaad ee diiwaangelinta codbixiyeyaasha aan hore isu diiwaan gelinin.
HARGEYSA, Soomaaliya - Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Maamulka Somaliland Cabdirashiid Riyaraac ayaa sheegay in goobaha ay shalay diiwaangelintu ka billaabatay ay furnaan doonaan ilaa labada bisha December ee soo socota.
Ujeedada diiwangelintan cusub ayaa uu Guddoomiyaga Guddiga Doorashooyinka ku sheegay in looga golleeyahay sidii kaararka cod-bixinta ay u qaadan lahaayeen dadkii aan hore isku diiwaan galin iyo dhallinyarada qaan gaadhka noqotay intii ka dambaysay doorashadii madaxtinimo ee bishii November, sanadkii 2017 ka qabsoontay Somaliland.
“Wejiga koowaad ee diiwaangelinta waxay ka bilaabatay gobolka Awdal iyo Degmooyinka Gabiley, Balli Gubadle iyo Degmada Sallaxley waxayna dhammaan doontaa 2-da bisha 12-aad ee sanadkan aynu ku jirno” ayuu yiri Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka ayaa intaas ku daray in haatan la diiwaangelinayo dhallinyarada qaangaarka noqonaya bisha May ee sanadka soo socda si ay u codeyn karaan doorashada goleyaasha deegaanka iyo wakiillada Somaliland.
“Dadka hadda gaaray 15 sano jir ama wakhtiga doorashadu qabsoomeyso ee bisha 5-aad ee sanadka socda 15 Jir gaaraya ayaa isdiiwaan gelinaya iyo dadkii cusbaa oo keliya, diiwaangelinta waxay ka dhici doontaa degmo doorasho kasta guud ahaan Soomaalilaan waxayna socontaa muddo afar maalmood ah” ayuu yiri Guddoomiye Cabdirashiid Riyaraac.